Inqaba yokugqibela: Ngaphantsi komhlaba – Ukukopa&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
Inqaba yokugqibela: Ngaphantsi komhlaba – Ukukopa&Ukuqhawula
Inqaba, the largest community of survivors, iwile.
Kanye isibane sethemba kwi-post-apocalypse, ngoku ihlelwa yinto enye nenye. Phakathi kwesiphithiphithi, iqela elincinane labasindileyo lakwazi ukubalekela kwintlango engumqwebedu.
UyiNkumanda yaba basindileyo. Ngelixa ubaleka i-zombie horde etshabalalise ngokupheleleyo indawo yakho yokugqibela, udibana nesakhiwo esingaqhelekanga siphuma phantsi. Impahla ephantsi kwaye ishiywe kunye neendlela ezincinci, ugqiba ekubeni uzimele kwesi sakhiwo. Liqala ke iphulo lakho lokusinda kweli lizwe lizaliswe zii-zombies.
【KWAKHA & YENZA INDLELA YOKUKHUSELA YAKHO】
Yandisa indawo yakho yokuhlala ngezixhobo ezininzi ezinje ngeSatellite Nexus, Iijenereyitha zoMbane, uLawulo lweMishini, njl. Yila uyilo lwekhusi nangayiphi na indlela othanda ngayo!
【AMAQHAWE KUNYE NABASINDILE】
Wonke amaqhawe kunye nabasindileyo banezakhono ezizodwa zobomi eziye zabanceda basinda kwi-apocalypse. Ukusuka kubapheki, oogqirha, kunye neenjineli kwizazinzulu, abasebenzi basezimayini, kunye namajoni, kuxhomekeke kuwe ukuba usebenzise izakhono zabo ngokufanelekileyo!
【UKWENZIWA KWEQELA KUNYE NESYNERGY】
Qokelela iqela elahlukileyo lamagorha, ngamnye unobuntu kunye nobuchule obahlukileyo. Yenza indibaniselwano yeqela lakho olithandayo ukukunceda ukuba woyise nezona meko zinzima.
Hamba ngaphandle kwekhusi kwaye ufune izixhobo ezixabisekileyo kwiindawo ezinqabileyo.
Misa iinkampu ukuze zisebenze njengeziseko zokusebenza eziya phambili kunye neendawo zemithombo. Kodwa lumkani! IiZombi zinokuhlasela nangawuphi na umzuzu!
【SEKELA UBUDLELWANO NABAHLOBO】
Ukulwa wedwa kunzima, ngoko kutheni ungalwi kunye nabahlobo? Joyina okanye wenze i-Alliance kwaye utshabalalise ezo zombies ziyingozi kunye namahlakani! Ncedisa amahlakani ngokukhawulezisa ulwakhiwo lomnye kunye nophando lobuchwephesha.
Yimeko yokuphumelela nokuba yeyiphi na indlela! Konke okanye akukho nto ngoku! Phuma, Umphathi, kwaye uqalise i-adventure yakho!
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Fortress, Ngaphantsi komhlaba
← Tycoon yeoli: I-Gas Idle Factory Cheats&Ukuqhawula Hlanganisa kwiNqila – Ukukopa&Ukuqhawula →